General sumo - China Ningbo Ruking Electrical
Mapatani Kucheka kuronga
Mapatani Kucheka plotte
Ningbo RUK Technology Co., Ltd. munhu yepamusorosoro zvebhizimisi kuita Industrial kushandisa michina ino, midziyo uye vakarondedzera haringakupembedzi zvikamu, uyewo izere yakatarwa yayo chirongwa kuti R & D, kugadzira, rokutengesa uye basa yose.
Tine chikwata nenyanzvi kwaisanganisira nomazvo uye kuvimbika vanhu vanodzivisa chinokosha pambiru aifamba dept, michina, zvemagetsi, combiyta zvakanaka uye. Tinewo pamwe papurogiramu yacho R & D pamwe mudzimba zvakanaka uzivewo yunivhesiti uye mhiri kwemakungwa, kunyanya kuuya zvemichina Europe uye nyanzvi. We vakazvimiririra akaongorora uye vakava CAD / Cam revatema NC nokuveza hurongwa, uyewo controller uye dzokuti aida ari kushandisa michina mumunda. Products zvinonzi nevakawanda kushandiswa zhinji maindasitiri akafanana matehwe, shangu, nenguvo, bhegi, kavha, mapurasitiki kusanduka zvinhu, remubatanidzwa zvinhu, muchina maturusi uye Erekitironi. We zvakazara dzika ISO9001 yepamusoro utariri hurongwa, uye akahwina advertising simba mumhuri uye mhiri kwemakungwa.
RUK ano chengeta pfungwa realism uye utsanzi sezvo zvebhizimisi mweya, nomwoyo wose sezvo basa pamuviri. Tine chivimbo chakazara kuti urumbidzwe wako uye kuvimba Via hwakanaka, basa vepachokwadi uye kuti kukosha kuti mutengi pasi redu unremitting kuita.
Post nguva: Mar-06-2018
Wa25 Shanghai APPPEXPO
RUK ano chengeta pfungwa realism uye Media ...